रामधुनीका कृषकको तरकारी खेती अनुगमन – राष्ट्र र राष्ट्रियताकाे प्रतिविम्व-रेडियो रामधुनी
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २८, २०७७ समय: १२:३९:०८
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका कार्यालय कृषि शाखाको आयोजनामा जनप्रतिनिधी सहित नगरको विभिन्न वडामा व्यवसायिक तरकारी खेतीको बुधबार अनुगमन गरेको छ ।
कृषिशाखाका दुर्गा सापकोटाले व्यवसायिक तरकारी खेतीको विकास तथा कृषकहरुलाई अनुदान दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको सुरु गरेको बताइन् । बुधबार नगरको अनुगमन टोलीले रामधुनी वडा नं. ९ मा अनुगमन गरेको हो । स्थानिय सन्दासी बाबा कृषक समुहका सदस्य ढोरन चौधरीले १५ कठ्ठा जग्गामा लगाएको तरकारी बारीको टोलीले अनुगमन गरेको हो । चौधरी विगत १० वर्ष देखी तरकारी खेती गर्दै आइरहेका छन् । यस अघि वैदेशीक रोजगारमा खटिएका उनले आफ्नै ठाउँमा केही गर्ने उद्देश्यले व्यवसायिक तरकारी खेतीको थालनी गरेको बताए । उनको बारीमा अहिले भिन्डी, फर्सिको मुन्टा, खुर्सानी, बैगन, घिरौला, लौका काक्रा, हरियो साग लगाएतको बाली रहेको छ । चौधरीले लकडाउनको समयमा खाद्य मल, किटनाशक औषधि, समयमा नपाउनु र उचित बजारको व्यवस्थापन नहुँदा समस्यामा परेको बताए । संदासी बाबा कृषक समुहमा ४० जना सदस्यहरु आबद्ध रहेका छन् । समुहमा आबद्ध कृषकहरुले व्यक्तिगत रुपमा चौपाया (गाई, बाख्रा ) पशुपालन, तरकारी खेती, धान, गहुँ मकै खेती गरिरहेका छन् । केही सदस्यहरु भने व्यवसायिक रुपलेनै तरकारी खेती गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी सोही ठाउँमा स्थानिय त्रिलोक चौधरीले संचालन गरेको निक एग्रो प्रालि.मा पनि टोलीले अनुगमन गरको छ । चौधरीले अढ्ई विगाहा जग्गामा तिन वटा माछापोखरी संचालन गरेको र पोखरीको डिल तथा पोखरी छेउको जग्गामा तरकारी खेति गरेका छन् । उनको बारीमा बोरी, भिन्डी, खुर्सानी, टमाटर, फर्सी लगाएतको बाली रहेको छ । चौधरीले प्रालि संचालनका लागि १८ लाख रुपैया लगानी लगाएको बताए । उनले तरकारी बारीमा मात्र यस वर्ष ६० हजार लगानी गरेको बताए । २० वर्षको वैदेशिक रोजगार पछि उनले आफ्नै ठाउँमा कृषि क्षेत्रमा विकास गर्ने उद्देश्यले प्रालि. संचालन गरेको जानकारी दिए । गत वर्षदेखी एग्रो फार्म संचालन गरेको उनले स्थानिय ठाउँमा ३ जनालाई नियमित रोजगारी दिएको बताए । उनले कृषि जन्य सामग्री बिक्रीबाट राम्रै आम्दानी भइरहेको जानकारी दिए । उनले आर्गानिक मलबाट तरकारी उत्पादन गरिरहेकोले यहाँ उत्पादित तरकारी स्वस्थकर रहेको जानकारी दिए । चौधरीले लकडाउनले गर्दा उत्पादित तरकारी विक्रि वितरणमा समस्या भएको र मुस्किलले बजारमा लगेता पनि उचित मुल्य पाउन नसकेको समस्या पोखे ।
अनुगमन टोलीमा रामधुनी २ का वडाध्यक्ष रामनारायण चौधरी, नगरकै ६ नं. वडा सदस्य लक्ष्मी चौधरी, वडा नं. ९का वडा सदस्य पुष्पलाल चौधरी, प्राविधिक विजय चौधरी, कार्यपालिका सदस्य रामकरण खर्गा लगाएतको सहभागिता रहेको थियो । व्यवसायिक तरकारी खेती विकासका लागि कार्यक्रम रहेको अनुगमनमा सहभागि भएका सदस्यहरुले बताए । कृषि शाखा प्रमुख सापकोटाले तरकारी खेती तथा मत्स्य पालन व्यवसायमा किसानले विविधकारणले क्षति भएको भए क्षति पुर्तिको माग फारम भर्न सकिने कृषकहरुलाई जानकारी दिए ।